Amankomane Archives - Impempe
UMntungwa ufuna ukubuyisa isithunzi samankomane ngokushaya uRay
April 17, 2022 Impempe.com
Alfred Ngubane U-Andile Mntungwa uthi uzobuyisela ezamankomane lapho ekumele ngabe akhona njengoba ekholwa ukuthi uzoyinqoba impi azoyilwa noCowan Ray. UMntungwa ukuveze lokhu ngesikhathi ekhuluma neMpempe ngalempi yakhe abazobe bebanga kuyo ibhande lakuleli esisindweni seSuper Middleweight. […]
Leave a commentAmankomane, Ezakamuva
UMantengu uzowagaxa emgibeni amagilavu uma ehluliwe
Alfred Ngubane U-Innocent “Tycoon” Mantengu uthi uma kuke kwangamhambela kahle kule mpi yakhe ezayo ngeke asagxila kakhulu esibhakeleni. Ekhuluma neMpempe kamuva nje, uphakamise ukuthi le mpi izocacisa ngekusasa lakhe kwezamanqindi. UMantengu uzoxhimfana noThato Bonokoane ezama […]
UTalent nomfowabo sebezokhuthaza amabhokisa enhla neKZN
April 3, 2022 Impempe.com
Alfred Ngubane Izelamani zakwaZulu Olundi sezisungule inkampani yokuqhatha izimpi ngenhloso yokuthuthukisa lo mdlalo kule ndawo yangakubo. UTalent Zulu nomfowabo uFezisivumelwano Zulu bahlangane noKooise Ntuli oyimenenja yeMthale Boxing Promotion. UTalent ukhulume neMpempe wathi bamabhokisa amaningi kakhulu […]
UMapule uthembisa ukulelamanisa maduze ibhande lakhe
March 28, 2022 Impempe.com
Alfred Ngubane UMapule Ngubane ubhodlele kuRushida Malik wabuyisa ibhande lakhe wabe esethembisa ukulelamanisa ngamanye ngokushesha. Le ntokazi yaseMabomvini ihlule uRushida ngamaphoyinti eGreyville Racing Course empini eqale ishisa yaze yaphela isezingeni elifanayo. Ekhuluma neMpempe ngemuva kwempi, […]
Usahlose ukukhiqiza abanye ompetha ‘umshini’ owuNdlovu
March 26, 2022 Impempe.com
Alfred Ngubane USamson Ndlovu ongumqeqeshi wesibhakela odabuka eMtubatuba usephenduke umshini wokukhiqiza ompetha kulo mdlalo. UNdlovu usezibonakalisile ukuthi ungumgqeqeshi onohlonzo ngomsebenzi omuhle awenzela amabhokisa ewaphendula ompetha. Impempe ikhulume naye ukuthola kabanzi ngomsebenzi wakhe. Usithathe wasibeka ngohambo […]